ဝဋ်” – Grab Love Story
ဟင့်အင်း ကို မပြန်လာနဲ့ ကျောင်းက မပိတ်သေးဘူး။ ပြီးတော့ နွေးကို .. နွေးကိုသာ လမ်းခွဲပေးပါ ကိုရယ်နော်
ဟင့်အင်းနွေး ခုမှနုတုန်းဆို ဒီအရာတွေက ရှင်းလို့ရတာပဲ
ဟင့်အင်း.ဟင့်အင်း နွေးအမှားကို နွေးခံမယ် နွေးမလုပ်ရက်ဘူးကို နွေး လူသတ်သမား မဖြစ်ချင်ဘူး
နွေးရာ..ကို့ကိုပြောပါအုံး ဘယ်သူနဲ့ရတဲ့ ကိုယ်ဝန်လဲ
ဟင့်အင်း ကိုရယ် နွေးမပြောပါရစေနဲ့
နွေး .. နွေးကိုယ်နဲ့ လွယ်မွေးရတဲ့ ကလေးကိုကိုတို့ကလေးလို့ ကိုသတ်မှတ်မှာပါ ကိုနွေးကို အမြဲချစ်နေမယ်နွေး ကို့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပါနွေးရယ်
နွေ ကိုယ်ဝန်က ကို့ အန်ကယ်နဲ့ ရခဲ့တာ
ကျွန်တော် ကိုယ့်နားကို မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်အတွေးထဲမှာ အန်တီလေးနဲ့ အတူလိုးခဲ့ကြတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို တရေးရေး ပြန်မြင်ယောင်လာမိသည်။
ကျွန်တော် ဝဋ်လည်တာများလား ဝဋ်မှာအမြဲ ငရဲမှာအပတဲ့ အဲ့ဒီစကားက မှန်များနေပြီလား၊
ဟုတ်တယ် ခုဆို အန်ကယ်ခွင့်ရလို့ ပြန်သွားတာ လေးပတ်ရှိပြီပေါ့။ ဒီမှာ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ထဲ ကျန်နေခဲ့တာ။ အန်တီလေးက သူမိသားစုတွေရှိတဲ့ ဖားအံကို သွားနေတယ်တဲ့ အဲ့ဒီအချိန် အိမ်မှာ နွေးနဲ့ အန်ကယ်ပဲ ရှိနေမှာပေါ့။
ကို နွေးကိုရွံသွားပြီလား နားထောင်နေရဲ့လား
အင်း ကိုနားထောင်နေပါတယ်နွေး ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ နွေးကို ကိုယုံပါတယ်နွေးရယ်
ဟင့်အင်းကို ဖောက်ပြန်တဲ့ မိန်းမကတော့ ဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမပါပဲ ကိုရယ် နွေးကို လမ်းခွဲလိုက်ပါနော် ကို နွေးမပြောချင်တော့ဘူး ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်နော်
ခဏလေးနွေး ကိုနွေးကိုဘယ်တော့မှလမ်းမခွဲဘူး ပြီးတော့ ကိုတူလေးကို ကိုသားလို့ပဲ ကိုသတ်မှတ်တယ်
ကျွန်တော် စကားတွေကို အစီအစဉ်မဲ့ ပြောနေမိသည်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လဲ အန်တီလေးနဲ့အတူ လင်မယားတွေ ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ မပြောရဲခဲ့ဘူး ပြောဖို့လဲ မရဲခဲ့ဘူးလေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကံတရားရဲ့ ဒဏ်ခတ်မှု့ကိုတော့ ကျွန်တော်လက်ခံဖို့ အသင့်ပါပဲ။
ဘယ်လိုတွေ ဖြစ်ခဲ့တာလဲနွေးရယ် ကို့ကိုပြောပြလို့ရရင် ပြောပြပါလားကွာ ခုရော အန်ကယ်က အိမ်မှာလား
ဟင့်အင်း အပြင်သွားတယ် သူမသိသေးပါဘူး ခုဟာကို
အဲ့ဒီညက အန်ကယ်က သူ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ သောက်လာတာ ဒေါ်လေးကတော့ ဘားအံသွားတယ် အဲ့ဒီမနက်ပဲ
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ လူက နဲနဲအနံထွက်နေတာနဲ့ နွေးလဲ သူအိပ်ဖို့စီစဉ်ပေးနေတုန်း. ဟင့်ဟင့်
နွေးကို အတင်းကြီး ဆက်ဆံတာလားဟင် ကိုစိတ်ပူလိုက်တာနွေးရယ်
ဟင့်အင်းမဟုတ်ပါဘူး ဆိုဖာပေါ်ကနေ အိပ်ယာပေါ်ကို တွဲခေါ်သွားပေးယုံပါ အိပ်ယာဘေးရောက်တော့မှ နွေးကို ဒေါ်လေးအမှတ်နဲ့ ဖက်ပြီးတော့ဟိုဟင့်ဟင့်ဟင့်
အင်း.အဲ့ဒါမှ နွေးအရှက်ကို ကာကွယ်နိုင်မယ်လေ နွေးရယ်
ကိုရယ် နွေးလို လူတစ်ယောက်ကို ဘာလို့ အဲ့လောက်ကောင်းနေရတာလဲ
နွေးက ကိုဇနီးလေနွေး.. ပြီးတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ် နွေးကိုကာကွယ်ပြီး ချစ်သွားဖို့ ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပြီသားလေ
ကျွန်တော်စကားကို ဆက်မပြောဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ဒါက ကံတရားရဲ့ အတုန့်အလှည့်တစ်ခုဆိုတာကိုပေါ့
ကို .နွေး အန်ကယ်ပြန်ရောက်ရင် ပြောသင့်လား
နွေးမေးတာကိုဖြေဖို့ ကျွန်တော် မဆုံးဖြတ်တတ်ခဲ့ဘူး။ အန်ကယ်ရော ဘယ်လိုတုန့်ပြန်လာမလဲ ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးလေ။
ကိုနဲ့ ခွဲနေရတဲ့ တစ်နှစ်ကျော်မှာ နွေး ဘယ်လိုခံစားနေရမလဲ ကိုနားလည်ပါတယ် ပြီးတော့ ကိုယ်နွေးကို ခွင့်လွှတ်တယ် ကိုတို့အတူ အကောင်းဆုံး ဖြေရှင်းကြတာပေါ့။ နွေးပြောချင်တဲ့ စိတ်ရှိရင် ပြောပြလေ ပြောလဲပြောသင့်တယ်ထင်ပါတယ် ပြီးတော့ ကိုလဲ စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းပြီးတော့ အန်ကယ်နဲ့ စကားပြောရမယ် ဒါကတော့ ဒီရောက်မှပဲ စီစဉ်တာပေါ့နွေးရယ် ခုနားလိုက်အုံးနော် ကိုလဲ ရေချိုးလိုက်အုံးမယ် ခဏနေ ကျောင်းသွားရတော့မှာ
ကျွန်တော်စကားတွေ အများကြီး ပြောပြီးတော့ ဖုန်းချလိုက်မိတယ် ရင်ထဲမှာတော့ နှမျောတဲ့ ခံစားချက်ရော တစ်ခုခုကို နောင်တရနေမိတဲ့ ခံစားချက်တွေပါ ရောထွေးလို့နေသည်။
မှန်တင်ခုံလေးက မှန်လေးထဲမှာ နွေးကိုယ့်ကိုကိုယ် ငေးကြည့်နေမိတယ်။ ကိုနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး ၆လကျော်မှာ ကိုထွက်သွားခဲ့တယ် ခုဆို ခွဲနေခဲ့ရတာ တစ်နှစ်ကျော်ပေါ့..ဒီကြားထဲမှာ စိတ်ရဲ့တောင့်တမှု့တွေကိုနွေးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေကို့အန်ကယ်နဲ့ အတူ တစ်အိမ်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ နွေးစိတ်တွေ ဗလောင်ဆူခဲ့တဲ့ အချိန်တွေရှိခဲ့သည်။ အန်ကယ်ကိုယ်တိုင်ကလဲ သမီးလေး တူမလေးတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံပါသည်။ ဒီအပေါ်မှာပဲ နွေးသာယာမိတာလား ကိုယ့်အပေါ်ကို လွမ်းမိုးပြီးတော့ ကိုယ်က စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပစ်ပြီး ချွဲနွဲ့လိုက်ချင်စိတ်တွေ နွေးခံစားနေရတာ ကြာခဲ့ပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ အမှတ်မထင် ကို့်အန်ကယ်မိသားစု ရန်ကုန်ကို အလည်ပြန်လာတဲ့ အချိန်မှာ အန်ကယ်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့ ဆက်ဆံမှု့တွေကို နွေးသာယာသွားမိတယ်ထင်သည်။ မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ အနေနီးနေတဲ့ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်အပေါ် ချွဲနွဲ့မိတာ အပြစ်ဆိုရင်တော့ နွေးအပြစ်ရှိပါတယ်။
ပန်းရောင်ဂါဝန်လေးပေါ်ကနေ ဗိုက်ကလေးကို လက်နဲ့အုပ်ထားမိတယ်။ ဗိုက်ကတော့ ဘယ်လိုမှ ဖြစ်မနေသေးပေမဲ့ အတွင်းထဲမှာ နွေးရဲ့ရင်သွေးလေး ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ အသိက မိခင်စိတ်ကို နိုးကြွလာစေသည်။
အိမ်ရှေ့တံခါးက ဘဲလ်သံလေးကြားတော့ နွေးရင်တွေ ထိတ်သွားမိသည်။ ည ၁၀နာရီခွဲ
တံခါးလေးကို ဖွင့်လိုက်တော့ အန်ကယ်ဝင်လာလေသည်။
နွေးပုခုံးလေးကို နောက်ကနေကိုင်ရင်း မေးလေသည်။ အိမ်တံခါးက ဘာဂျာတံခါးလေးကို သော့ခတ်ပြီးတော့ အိမ်ခန်းတံခါးကို ပိတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန် နွေးအန်ကယ်ဘက်ကို လှည့်လိုက်မိသည်။
အန်ကယ်ဆီက အနမ်းနွေးနွေးက နွေးပါးတစ်ဖက်ပေါ်ကို ကြွေကျလာပြန်သည်။
ဟုတ်တယ် နွေးတို့ စိမ်းမနေကြတော့ဘူးပဲ။ တကယ်ဆို လင်မယားအရာတောင် မြောက်ခဲ့ပြီးပြီဟာကို။ နွေးခါးလေးကို ဖွဖွလာကိုင်တဲ့ ကို့အန်ကယ်ကို နွေးတွေတွေလေး ငေးကြည့်နေမိသည်။
ကောင်းပါတယ် ဦးရယ် ဦး,ကို သမီးပြောဖို့ရှိတယ်
အိမ်ခန်းလေးထဲမှာ တိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တယ် အန်ကယ်လက်တွေက နွေးခါးလေးကို ကိုင်ထားဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ အန်ကယ်ရင်ခွင်ထဲကို နွေးတိုးဝင်ရင်း ပါးလေးအပ်လို့ ငိုချလိုက်မိသည်။ ငိုနေတဲ့နွေးကို အန်ကယ်က တင်းတင်းလေးဖက်လို့ပေါ့။
အန်ကယ်သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်ရှိတယ်သမီးလေး အန်ကယ်တို့ တစ်ခုခု လုပ်ကြမလားဟင်
ငိုနေတဲ့နွေးကို အသာအယာ ထွေးဖက်ရင်း ဆိုဖာလေးပေါ်ကို ခေါ်သွားခဲ့တယ် ဆိုဖာပေါ်မှာ အတူထိုင်မိတော့ နွေးပုခုံးလေးကို ပွေ့ဖက်ထားရင်း ရင်ခွင်ထဲမှာ နွေးကိုထွေးထားတဲ့ အန်ကယ်ဆီကနေ စကားသံတွေ ထွက်မလာခဲ့ဘူး။
သမီးလေး ဘယ်လိုဖြစ်ချင်လဲဟင် အန်ကယ်အန်ကယ်သမီးလေးကို စောင့်ရှောက်ပါမယ် ပြီးတော့ ဟို.
သမီး ကို့ကို ပြောပြလိုက်တယ် ဦးရယ်
အန်ကယ်ဆီက အံ့သြ အားနာပြီး တုန်လှုပ်သွားတဲ့ အမူအရာကို နွေးငေးနေမိပြန်သည်။
သူက နွေးကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး ပြီးတော့ အန်ကယ်တို့နဲ့အတူ လိုက်လာဖို့ပြောတယ်
ဒီတစ်ခါ ငေးကြည့်နေသူက အန်ကယ်ပေါ့..
ဦး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဖြေရှင်းပါမယ် သမီးရယ်
နွေးအန်ကယ့်ကို ပြုံးပြမိသည်။ ပါးအိအိလေးတွေပေါ်က စီးကျနေတဲ့ မျက်ရည်တွေကို သူက တယုတယ သုတ်ပေးနေသည်။ ပြီးတော့ နွေးနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို နမ်းလေသည်။ နွေးတုန့်ပြန်မိပါသည်။ တရှိုက်မက်မက် တုန့်ပြန်နေမိသည်။ ခုက မထူးတော့ဘူးရယ်လေ။
နှုတ်ခမ်းနှစ်ခု အသာအယာ နမ်းစုပ်နေရင်း နွေး နို့အိအိလေးတွေကို ဖွဖွလေးပွတ်နေသည်။ ပေါင်ကြားကနေ တစိမ့်စိမ့် စီးထွက်လာတဲ့ စောက်ရည်နွေးနွေးလေးရဲ့ စီးဆင်းသွားမှု့ကို နွေးခံစားမိလိုက်သည်။
ဟင့်အင်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဦးရယ် အသိုင်းအဝိုင်းဆိုတာ ရှိသေးတယ်လေ
ဟင့်အင်း.. ပြီးတော့ ဒေါ်လေးနဲ့ သားသား
အန်ကယ်ဆီက စကားလုံးတွေ တိတ်ဆိတ်သွားပြန်သည်။
ကဲပါ ဖြစ်လာတဲ့ အရာတိုင်းကို နွေးတို့ ရင်ဆိုင်ကြရမှာပေါ့ နွေးတို့က မှားခဲ့သူတွေပဲကို
နွေးမရှက်တော့ပါဘူး ပုဆိုးပေါ်ကနေ အန်ကယ့်လီးကို ဖွဖွလေး စမ်းနေမိသည်။ ဟုတ်တယ် နွေးတို့က လင်မယားတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီပဲကို.။
ခါးပုံစလေးကို ဖြေချလိုက်တော့ အမွှေးမဲမဲလေးတွေရဲ့ အလယ်မှာ တောင်မတ်နေတဲ့ လီးတုတ်တုတ်လေးကို စမ်းမိလေသည်။ ကို့ထက်ကြီးတဲ့ လီးတုတ်တုတ်လေးက နွေးရဲ့ ပန်းငုံလေးထဲကို အလည်ရောက်ခဲ့ပြီးလို့တောင် သုတ်သွေးတွေကို ထွေးအံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
နှစ်ဦးသားရဲ့ သွေးစက်တွေ ပေါင်းစပ်လို့ အန်ကယ့်ရဲ့ ရင်သွေးလေးကိုတောင် နွေးလက်ခံလိုက်ရပြီးဖြစ်သည်။
ပန်းရောင်ဂါဝန်အနားစလေးကနေ ပြူထွက်နေတဲ့ နွေးရဲ့ဒူးဖြူဖြူလေးကို ဦးက ဖွဖွလေး လာထိလေသည်။ ပထမဆုံးဖြစ်ကြတဲ့ ညကလို နွေးမရုန်းမိခဲ့ဘူး။ ဂါဝန်အနားစလေးက ဖုံးကာထားတဲ့ သခင်မရဲ့ ပေါင်တံဖြူဖြူလေးတွေပေါ်ကို လိပ်တက်လာခဲ့လေသည်။
အခန်းထဲသွားရအောင်နော် လှေကားကနေဆို အသံကြားရမှာ
ဒီတစ်ခါဦးဆောင်ခေါ်သွားသူက နွေးရယ်လေ။ အခန်းလေးထဲမှာ မီးမထွန်းထားပေမဲ့ ဧည့်ခန်းကနေ ဝင်လာတဲ့ အလင်းမှိန်မှိန်လေးတော့ရှိသည်။ ဒါက နွေးနဲ့ ကိုရဲ့ မင်္ဂလာဦးအခန်းလေးပေါ့ နွေးတို့ပျော်ခဲ့ကြသည်။ နွေးရဲ့ငြီးသံလေးတွေက ဒီအခန်းလေးထဲမှာ ပျံ့လွင့်ခဲ့ဘူးတယ်။ ကိုနဲ့ ပြီးတော့ ဦး
အသက်ငါးဆယ်ကျော်အရွယ် အတွေ့အကြုံ ကောင်းကောင်းရှိတဲ့ ဦးရဲ့အယုအယတွေအောက်မှာ နွေးသာယာ မိန်းမောခဲ့ဖူးသည်။
ခုလဲ ဦးရင်ခွင်ထဲကို နွေးဝင်မိပြန်သည်။ ရှပ်အင်္ကျီ ကျယ်သီးတွေကို နွေးဖြုတ်ပေးတော့ ဦးက နွေးကိုကြည့်ရင်း ပြုံးလေသည်။ ဇနီးသည်က ခင်ပွန်းရဲ့အင်္ကျီကို ချွတ်ပေးသလို ခံစားနေရမလား မသိ။ အင်္ကျီကိုချွတ်လိုက်တော့ တောင့်တင်းတဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်မှာ တောင်မတ်နေတဲ့ လီးတုတ်တုတ်လေးနဲ့ ရပ်နေတဲ့ ဦးကို နွေးဖက်လိုက်မိသည်။ ဦးရဲ့လီးက နွေးဂါဝန်ပေါ်ကနေ နွေးဆီးခုန်မို့မို့လေးကို ဖိကပ်လို့နေသည်။ နွေးဖင်အိအိလေး နှစ်ဖက်ကို ဦးက ဖွဖွလေး ဆုပ်ကိုင်ပွတ်သပ်နေသည်။ ဦးရင်ခုန်သံကို နွေးကြားရသည်။ နွေးလဲ ရင်တွေခုန်နေသည်။
ဦးစကားလုံးတွေက နွေးအတွက်ချိုလေသည်။ ပြီးတော့ ဦးရဲ့ အယုအယတွေက နွေးကို လုံခြုံနွေးထွေးစေသည်။ ဒါကပဲ နွေး ပုံအပ်မိတဲ့ တစ်ခုထဲသော အရာထင်သည်။ နွေးလုံခြုံချင်သည်။ တစ်ယောက်ထဲ လင်ယောင်္ကျားနဲ့ ဝေးပြီး တစ်နှစ်ကျော် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်အတွက် ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က ပေးတဲ့ လုံခြုံနွေးထွေးမှုကို နွေးတောင့်တမိသည်။ နွေးကိုယ်ပေါ်က ဂါဝန်ပန်းရောင်လေးကို ချွတ်ပေးတော့ နွေးလက်လေး မြှောက်ပေးထားမိသည်။ နွေးက ကလေးလေး တစ်ယောက်ပေါ့။ ဦးရဲ့ ကလေးလေ။
နက်မှောင်တောက်ပြောင်တဲ့ ဘော်လီအနက်ရောင်လေးက နွေးနို့နှစ်မွှာကို ထွေးမထားသည်။ နို့နှစ်လို ဖြူဥနေတဲ့ အသားစိုင်တွေပေါ်မှာ ဘော်လီအနက်ရောင်လေးနဲ့ အတွင်းခံ အဖြူနက်ကြားလေးပဲ ရှိတော့လေသည်။
ချိုင်းအောက်ကနေ လက်လျိုပြီးတော့ ကျောကဘော်လီ ချိတ်လေးကို ဖြုတ်ပေးပြန်တော့လဲ နွေးငြိမ်ငြိမ်လေး ခံယူနေမိသည်။ ပုခုံးပေါ်က ဘော်လီကြိုးလေးကို နွေးလက်နဲ့ လျောချရင်း ဘော်လီအနက်ရောင်လေးကို ကြမ်းပြင်ပေါ် ချလိုက်မိသည်။ နူးညံ့အိစက်နေတဲ့ ရင်နှစ်မွှာက လေထဲမှာ ယိမ်းတုန်သွားလေသည်။
ဦးရဲ့သမီးလေးတဲ့ ဟုတ်တယ်။ဦးကိုနွေး သမီးလေးတစ်ယောက်လို ချွဲချင်မိတယ်။ ကုတင်ပေါ်ကို နှစ်ယောက်အတူ လှဲချလိုက်တော့ အလိုးခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိက နွေးစောက်ဖုတ်ကို စွတ်စိုလာစေသည်။ နွေးပေါင်ကြားက အတွင်းခံ ဘောင်ဘီ ဂွကြားလေးမှာတောင် စိုအိလို့ပေါ့။
ပက်လက်လေး လှန်နေတဲ့ နွေးဘေးကနေ လက်နဲ့ ခေါင်းကိုထောက်ရင်း ကျန်တဲ့တစ်ဖက်နဲ့ နွေးနို့လေးတွေကို ပွတ်သပ်ဆော့ကစားနေတဲ့ ဦးကို နွေးငေးနေမိသည်။
ဒေါ်လေးနဲ့ သမီးက ဘာကွာလဲဟင်
မင်းဒေါ်လေးက ထန်တယ် သမီးရဲ့
နူးညံ့တယ် ချစ်စရာကောင်းတယ် ပြီးတော့..
မင်းခန့်ရော သမီးကို ခဏခဏ လိုးမှာပေါ့နော်
ပြီးတော့ ဒီအခန်းလေးထဲမှာပဲ ဦးက သမီးကို လိုးတာလေ
ဟိုးအရင်က အမြဲရှက်တတ်တဲ့ နွေးလေ ခုတော့ တော်တော်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
ဦးလက်တစ်ဖက်က နွေးဗိုက်အိအိလေးပေါ်ကို လာထိလေသည်။ ပြီးတော့ ဖွဖွလေး ပွတ်နေပြန်သည်။
ဒေါ်လေး ကိုယ်ဝန်နဲ့တုန်းကရော ခုလို ပွတ်ပေးတာလား
ကလေးမွေးလာရင် ဖေဖေ လို့ ခေါ်စေချင်လားဟင်
အင်းပေါ့ ဖေဖေ ပြီးတော့ သမီးကို မေမေလို့ ခေါ်ရမှာပေါ့
ဦးလက်တစ်ဖက်က ဗိုက်အိအိလေးပေါ်ကနေ အောက်ကို လျောဆင်းလာသည်။ အတွင်းခံဘောင်းဘီ သားရေကြိုးပြားလေး အောက်ကို ဖွဖွလေး လျောတိုးဝင်ရင်း ဆီးခုံမို့မို့လေးကို ဖွဖွလေး ပွတ်ထိနေပြန်သည်။
သမီးနဲ့ ဦး ဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာ ဒေါ်လေးသိရင် စိတ်ဆိုးမယ် ထင်တယ်နော်
ဦးနဲ့ မလိုးဖြစ်တာတောင် ကြာပြီလေ
ဘာလို့ရယ် မဟုတ်ပါဘူး ဒီလိုပဲ အနေကြာလာလို့ ထင်တယ်
နွေးရင်ခုန်နေသည်။ ကိုတောင် နွေးကို ခုလိုချိန်မှာ ခုလိုမခေါ်ခဲ့ဘူး။ မိန်းမတဲ့…. ဟုတ်တာပဲလေ။ နွေးက ဦးရဲ့ မယားဖြစ်နေပြီဟာကို။ အသက်ကြီးကြီး ယောင်္ကျားတစ်ယောက်က နွေးကိုလိုးလိမ့်မယ်လို့ နွေးတစ်ခါမှ မတွေးခဲ့ဖူးဘူး။ ခုလို ကုတင်ပေါ်မှာ နှစ်ယောက်ကြည်နူးရင်း စကားတွေပြောရတာ နွေးသဘောကျလေသည်။ နူးညံ့တယ်လို့ ခံစားရသည်။ ပြီးတော့ လုံခြုံနွေးထွေးသည်။ မိန်းမဆိုတာ မှီနွဲ့လိုက်ချင်တဲ့ အမျိုးဖြစ်သည်။
နွေးလက်တစ်ဖက်နဲ့ ဦးပေါင်ကြားက လီးတုတ်တုတ်လေးကို လှမ်းကိုင်လိုက်မိသည်။ နွေးထွေးတင်းမာနေတဲ့ လီးတံတုတ်တုတ်လေးက နွေးလက်ဖဝါးအိအိလေးထဲမှာ မာတင်းနွေးထွေးနေသည်။ နွေးနှလုံးသားထဲထိ နွေးထွေးမှု့ကို ခံစားရသည်။
တစ်အိမ်ထဲမှာ မိန်းမနှစ်ယောက် ထားမလို့လား
မင်းခန့်နဲ့ အတူနေဖို့ပြောတာပါ ပြီးတော့ ဦးတို့ရဲ့ ကလေးလေးကိုလဲ အနားမှာရှိစေချင်တယ် ဦးအားလုံးကို တာဝန်ယူမှာပါ
ပြီးတော့ သမီးကိုလဲ ဦး အမြဲ ယုယချင်တယ်
အတူတူပါပဲ ဦးဆီက နွေးထွေးမှု့ကို သမီးလိုချင်ပါတယ်
ဦးက နွေးဘေးကနေ အောက်ကို လျောဆင်းပြီးတော့ ပက်လက်လေး လှန်နေတဲ့ နွေးခြေနှစ်ချောင်းကြားကို တိုးဝင်ရင်း ဗိုက်လေးပေါ်ကို ပါးလေးအပ်ထားလေသည်။
အင်း ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေမေဗိုက်ထဲမှာ ဖေဖေ့အသံ ကျန်နေအောင် ပြောတာပါ
မေမေ ဖေဖေ ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေ ကြားရတော့ နွေးရင်ထဲမှာ နွေးနေမိသည်။ မိခင်စိတ်ဆိုတာ ဒါပဲလား မသိပါဘူး။ တရားဝင်သာ ရခဲ့တဲ့ကိုယ်ဝန်ဆို ပိုကြည့်နူးရမယ်ထင်သည်။ ကိုယ်ဝန်နဲ့မိန်းမက လင်ကိုပေါင်ကြားမှာထားရင်း ကြည်နူးရတဲ့ခံစားချက်ကို နွေးခံစားကြည့်မိသည်။
နွေးကဦးရဲ့ ဆံပင်တွေကို လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ ဖွလိုက်တော့ အောက်ကို ထက်လျောချလိုက်တဲ့ ဦးက နွေးပေါင်ကကြား စိုအိနေတဲ့ အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးပေါ်ကနေ နွေးစောက်ဖုတ်လေးကို နမ်းလေသည်။ ပေါင်ကြားမှာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို ခွထားရတဲ့ အရသာက နွေးအတွက် ပထမဆုံးပါ ကိုနဲ့ဆိုရင် တစ်ခါထဲ တန်းလိုးကြတာကို။ နွေးရဲ့ စောက်ဖုတ်နားမှာ ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို ထားထားရတာ နွေးရင်ထဲမှာ နွေးထွေးနေမိသည်။ စောက်ရေ နွေးနွေးလေးတွေ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ ပိုးသားလေးကို ဦးက စုပ်ယူလိုက်တဲ့အသံ ကြားလိုက်ရသည်။
ဦးရဲ့လက်တွေက အတွင်းခံ ဘောင်းဘီလေးကို နွေးရဲ့ပေါင်တံအရင်းလေးဖက် တွန်းဖယ်ရင်း စောက်ဖုတ်အိအိလေးပေါ်မှာ စိုရွှဲနွေးအိနေတဲ့ နွေးစောက်ဖုတ် အရည်ကြည်လေးတွေကို ဖွဖွလေး ယက်စုပ်နေသည်။
ပါးစပ်ကသာ ပြောလိုက်ပေမဲ့ နွေးခန္ဓာကိုယ်က ဦးအတွက် အရည်ကြည် နွေးနွေးလေးတွေကို ထပ်ပြီး စိမ့်ထွက်ပေးနေမိသည်။ နွေးဘဝမှာ နွေးရဲ့ စောက်ပတ်ကို ယက်ပေးဖို့ဆိုတာ တစ်ခါမှ မစဉ်းစားမိခဲ့ဘူး။ ခုဦးက နွေးစောက်ပတ်ကို ယက်ပေးနေသည်။ ဟိုးငယ်ငယ်ထဲက အရှက်တရားရယ်လို့ ဖုံးဖိခဲ့ရတဲ့ ပေါင်ကြားမှာ
ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ကို စိတ်ကွယ်ရာ နေရာလေးတစ်ခုမှာ ကားပေးလိုက်ရတဲ့ အရသာက နွေးအတွက် အားရနေမိသည်။ အရှက်တရားတွေကို မဖုံးကွယ်ပဲ ရမက်ထန်နေချိန်မှာ ကိုယ်ထိန်းသိမ်းဖုံးကွယ်ခဲ့ရတဲ့ လိင်အင်္ဂါကို ထိခွင့် ကိုင်ခွင် ယက်ခွင့် လိုးခွင့် ပေးလိုက်ရတဲ့ အရသာကို နွေးတပ်မက်နေမိသည်။ ကိုနဲ့မဟုတ်တဲ့ အခြားတစ်ယောက်ကိုပေါ့။ ကိုနဲ့ အတူရှိတဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ လင်ယောင်္ကျားဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ သာမန်လုပ်ရမဲ့ အရာတစ်ခုဆိုတဲ့ စိတ် .ခုတော့ ကိုယ့်လင်မဟုတ်တဲ့ အခြားတစ်ယောက်ကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ခွင့်ပေးရတဲ့ အရသာ.. တကယ်ကို မတူခဲ့ဖူးပဲ။ ဒီတစ်ယောက်က ကိုယ့်အပေါ် လုံခြုံနွေးထွေးမှု့တွေ ပေးတဲ့သူ ဖြစ်တာလဲပါမှာပေါ့။ ခါးထက်ဆီက အတွင်းခံဘောင်းဘီ သားရေကြိုးလေးကို ဦးက ဆွဲယူလိုက်တော့ နွေးဖင်လေးတွေကို ကြွပေးမိသည်။ စောက်ရေနွေးနွေးလေးတွေနဲ့ ချောအိစိုတောက်နေတဲ့ ပေါင်လည်က နွေးရဲ့ မအင်္ဂါလေးကို ဦးက ဖွဖွလေး လျှာနဲ့ ယက်နေပြန်သည်။ စောက်ပတ်အဝလေးကနေ စိမ့်ထွက်လာတဲ့ အရည်ကြည်လေးတွေက ဖင်ကြားတစ်လျှောက်ကနေ အိပ်ယာခင်းလေးပေါ်ထိ စိမ့်ကျလို့နေသည်။ စောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းလေးတစ်လျှောက် ယက်ပေးနေရင်းနဲ့ အရည်ကြည်လေးတွေ လျောဆင်းသွားတဲ့ တစ်လျှောက် ဦးရဲ့လျှာဖြားလေးက တစ်ရွေ့ရွေ့ပေါ့.
နွေးရဲ့ စအို အဝနားလေးဆီက နွေးသွားတဲ့ ခံစားမှု့လေးကို နွေးရလိုက်သည်။ စအိုဝလေးကို ဖွဖွယက်နေတဲ့ ဦးကို နွေးဖင်လေးမြှောက်ရင်း ကော့ပေးနေမိသည်။
စောက်ဖုတ်နဲ့ ဖင်ကို အားရအောင်ယက်ပြီးတော့မှ ပက်လက်လေးဖြစ်နေတဲ့ နွေးပေါ်ကို ဦးက မှောက်ချလိုက်သည်။ နွေးပါးလေးကို နမ်းနေပြန်သည်။ ဦးကိုတင်းတင်းလေးဖက်ရင်း နွေးခြေထောက်နှစ်ဖက်နဲ့ ဦးခါးကိုခွထားမိသည်။ ဦးရဲ့ လီးတုတ်တုတ်လေးက နွေးစောက်ပက် အိအိလေးပေါ်မှာ ဖိကပ်နေသည်။
ဦးနဲ့ သမီးနဲ့ လင်မယားတွေ ဖြစ်နေပြီနော်
နွေးနှုတ်ကနေ တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်မိသည်။ ဟိုးအရင်ထဲက အရှက်တရားအပြည့်နဲ့ ဖုံးဖုံးဖိဖိ နေတတ်တဲ့ နွေးဆိုတာကို ဘယ်သူကများယုံပမလဲ။ ခုလိုစကားတွေ ပြောနေရတာကိုက အရသာတစ်မျိုးဖြစ်နေသည်။
ဦးက သမီးလေးကို ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ
လိုးနေတာလေ.နွေးကို ဦးက လိုးနေတာ
သမီးရော ဦးကို ဘယ်လိုခေါ်ချင်လဲ
အင်း တကယ်တော့ နွေးလေးနဲ့ ဦး ဆို သမီးလေးလို့တောင် တော်လို့ရတာပဲ ဦးသာ ငယ်ငယ်နဲ့ မွေးရင်ပေါ့
နွေးဖြေပြီးတော့ ပေါင်လေးကို ကားထားပေးမိသည်။ ဦးက လက်တစ်ဖက်နဲ့ လီးတုတ်တုတ်လေးကို နွေးစောက်ဖုတ် အဝနားလေး တေ့ရင်း တအိအိနဲ့ လိုးသွင်းလို့ပေါ့.
နွေးစောက်ဖုတ်လေးထဲမှာ ဦးရဲ့ လီးခေါင်း နွေးနွေးလေး တိုးဝင်လာတဲ့ အရသာကို ခံစားနေမိသည်။ နွေး ဦးကို တင်းတင်းဖက်မိသည်။ စောက်ဖုတ် အတွင်းနံရံတွေက ဦးရဲ့လီးကို ထွေးစုပ်ထားပေးသည်။ ခါးလေးကို ဖွဖွလေးလှုပ်ရင်း ဖြေးဖြေးလေး လိုးသွင်းနေတဲ့ အရသာက နူးညံ့လိုက်တာ။ ကို့လို အတင်းဆောင့်လိုးတာမျိုး မဟုတ်ဘူး
နာလားဟင် သမီးလေး “
နွေးရင်ထဲမှာ လှိုက်ကနဲ နွေးသွားလေသည်။
နာလားတဲ့လေ နွေးအပေါ် သိပ်ကိုညှာတာတာပဲ ဦးရယ်။ နွေးနောင်တမရမိတော့ပါဘူး။ ဦးကိုပေးမိတာ နွေးနောင်တ မရချင်တော့ဘူး။ နွေးလိုချင်တာ အဲ့ဒီလို ကြင်နာယုယမှု့တွေပါ။
နွေးဆံနွယ်အိအိလေးတွေက အိပ်ယာခင်းပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲနေသည်။ လိုးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန် သားအိမ်နုနုလေးကို ထိမိတိုင်း အိပ်ယာခင်းလေးကို ဆုပ်ခြေနေမိသည်။
နွေးရင်ထဲက လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခေါ်မိသည်။
နွေးရဲ့ ယောင်္ကျားရော ကောင်းလား..
နွေးလေးတဲ့..ဦးစကားလုံးတွေက နွေးအတွက် အမြဲချိုမြိန်နေသည်။
အင့်.အ.အ.အ..ချစ်တယ်ယောင်္ကျားရယ်လိုးနော် နွေးစောက်ပတ်ကို လိုးပါ
နွေး စောက်ပတ်ထဲကို ဦး လီးရေတွေ ထပ်ထည့်ပေးပါအုံးကွာ..အားရှီးအား..ကောင်းလိုက်တာ
ဦးးက နွေးကို မှန်မှန်လေး ဆောင့်လိုးနေသည်။ အထက်အောက် ယိမ်းခါနေတဲ့ နွေးနို့အိအိလေးတွေကို ဦးက ဖမ်းဆုပ်ရင်း နွေးကို လိုးနေခဲ့သည်။
နွေးတောင်းဆိုတဲ့ အသံလေးကို ကြားတော့ ဦးက အဆက်မပြတ် လိုးသွင်းနေခဲ့သည်။
အအနွေးပြီးတော့မယ်.. အ. အအား..ရှီးအား. အား……….
နွေးတစ်ကိုယ်လုံး ပျော့အိနုံးခွေသွားခဲ့သည်။ ဦးကတော့ ဆောင့်လိုးနေဆဲဖြစ်သည်။
ထိန်းထားတဲ့ သုတ်ရည်တွေကို နွေးစောက်ဖုတ် အိအိလေးရဲ့ အတွင်းထဲက သားအိမ်နုနုလေးပေါ်ကို ဒုတိယအကြိမ် ပက်ဖြန်းလိုက်တဲ့ နွေးထွေးမှု့ကို နွေးခံစားလိုက်ရသည်။ ဦးက လီးကိုမထုတ်သေးပဲ နွေးပါးလေးကို နမ်းလေသည်။
အင့်နွေးကို မိန်းမလို့ သက်မှတ်တယ်ဆိုလိုးပေါ့
ဦးရဲ့လီးကို ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန် အထဲကနေ လျှံကျလာတဲ့ အရည်ဖြူလေးတွေက အိပ်ယာခင်းပေါ်ကို စိမ့်ကျသွားခဲ့သည်။အဲ့ဒီညက အာရုံတက်တဲ့ထိ ဦးနွေးကိုလိုးခဲ့လေသည်။
နွေးလဲ ဦးကို မငြင်းဆန်နိုင်လောက်အောင်ပါပဲလေ။
ဒေါ်လေးပြန်မလာခင်ထိ အိမ်ခန်းလေးထဲမှာ ဦးနဲ့ နွေးက ကြင်စဦး ဇနီးမောင်နှံလိုပါပဲ. နွေးကို ရေချိုးပေးသည်။ နွေးသေးပေါက်တဲ့ အချိန်တွေတောင် ကလေးလေး တစ်ယောက်လို စောက်ဖုတ်လေးကို တစ်ရှုးစလေးနဲ့ သုတ်ပေးတတ်လေသည်။ ကို့ကိုတော့ အဲ့ဒီအကြောင်းတွေ ထပ်မပြောပြဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။
ဒီလိုနဲ့ အချိန်တွေ တရွေ့ရွေ့ ကုန်ဆုံးခဲ့တယ်။ ခုတော့ ဦးရယ် ဒေါ်လေးရယ် သားသားရယ်
နွေးရယ် ကိုရယ် သမီးလေးရယ် အိမ်လေးတစ်လုံးထဲမှာ အတူတူပေါ့။ ကိုနဲ့ ဒေါ်လေးရဲ့ အကြောင်းတွေကို ဦးရော နွေးပါ သိထားသလို ဦးနဲ့ နွေးနဲ့ အကြောင်းလဲ ကိုနဲ့ ဒေါ်လေးက သိထားကြလေသည်။ အဲ့လို ပျော်စရာအိမ်လေး ဖြစ်လာမယ်လို့ နွေးတစ်သက်မှာ မတွေးခဲ့မိဘူး။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုအခန်းထဲမှာ ဒေါ်လေးအိပ်တဲ့အချိန် နွေးက ဦးရင်ခွင်ထဲမှာ ရှိနေလေသည်။ ခုလို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ ဘဝလေးကို နွေးပျော်နေခဲ့လေသည်။